Oogqirha bamazinyo baseKapa, ​​aMgangatho oPhezulu kaGoogle, iNkonzo yokuThengisa
WOWU! Iinkcukacha zobuchwephesha
WOWU! Mhlophe amazinyo
Ukungabonakali ngokucacileyo ii-Brace
Inqaku loLwandle lweCosmetic Dentistry
Ukurhona nokulala umphefumlo
Ukufakwa kwamazinyo kunye nokuBekwa ngaphezulu
Design Smile Design
Ugqirha wamazinyo okufutshane nam
Imbuyekezo Optismile Inc. Imigaqo | iimeko | nkqubo refund
Cofa ukuze ubize
Ngaba ugoba "ngugqirha wamazinyo ogqwesileyo eKapa"? Yintoni Ezisa Wena Apha Namhlanje ...
Wamkelekile kwindawo ephambili yenkulumbuso yaseKapa yokuphucula impilo yomlomo, ukuvuselela uncumo kunye nokubuyiselwa okupheleleyo.
Isithuba esabiwe ngu-ALYSSACHAPLIN (@houseoflyss)
Ndifuna ukuzolula amazinyo ngaphandle kokuqiniswa ...
Ndifuna ukuziva ndonwabile xa ndincuma ...
Hlaziya amazinyo am Mthubi ...
Ndijongeka mbi kwiintlanganiso ezikwi-Intanethi ...
Ndimbonile uAlyssa kwi-Instagram kwaye ndifuna into anayo, elula njenge-ABC ...
Bhukisha iVidiyo yakho yokuNxibelelana simahla ngoku
Khawufane ucinge ngolona ncumo lwakho luzithembileyo.
Indawo ephambili yeNkulumbuso yaseKapa yokuphucula impilo yomlomo, ukuvuselela uncumo kunye nokubuyiselwa okupheleleyo. Ukubonelela ngamazinyo akudidi oluphezulu lwehlabathi, iqela lethu elifudumeleyo, elinobuchule liya kukubeka ngokukhululeka ngenkonzo engxamisekileyo kunye nokhathalelo. Siza kukujonga njengobukumkani. Uncumo lwakho, luqinisekisiwe. Bhukisha ukubonisana nevidiyo namhlanje kwaye ungene kokutsha, uyakuthemba.
Oogqirha bamazinyo, abancedisi, ulawulo, ulwamkelo kunye nolawulo ... Iqela elikuphatha njengasebukhosini kwaye luzisa uncumo ebusweni bakho.
UGqirha Natalie van Niekerk
UGqr Cara Loubser
UGqr Harris Smeyatsy
UBusi Dynamite Mposwa
IVerona Gideons COO
UGqr Clifford Yudelman
Cofa ukukhetha ixesha elidlulileyo
Umsunguli we-OptiSmile uGqr Clifford Yudelman
Ngophononongo lweenkwenkwezi ezingaphezu kwe-181 ezintlanu kuGoogle nakuFacebook, ndiyakuqinisekisa ukuba iqela lam le-OptiSmile liya kwenza amava akho abe yinto onokuyonwabela nayo. Ndabuyela eMzantsi Afrika emva kweminyaka engama-32 phesheya kweLondon, eSan Diego nasePerth ukwakha eli ziko langoku lobugcisa lokunyanga amazinyo lisasazeke ngaphezulu kwe-500 yeemitha zesikwere. Siyi-prime minister of specialty specialty practice yale hlobo eKapa. Sinikezela ngokwenyani nge-Orthodontics engabonakaliyo (ii-brace ezicacileyo), WOW! Amazinyo okuthambisa enza mhlophe, ii-periodontics (iintsini ezophayo kunye nokudodobala koqoqosho), iiprosthodontics (izinto zokufakelwa, amazinyo okufakelwa kunye neebhlorho), ii-endodontics (iingcambu zemijelo), utyando lomlomo (amazinyo obulumko kunye nokukhupha) kunye ne-veneers, ukubopha kunye nokunye okuninzi. Sisebenzisa ii-microscopes, i-3D scanner, ushicilelo lwe-3D lwedijithali, imitha ephantsi ye-CBCT 3D X-ray kunye noyilo loncumo lwe-DSD. Ndivakalelwa kukuba ukwenza kwethu kwahlukile, kwaye uphononongo lwethu luyakukunceda wenze ingqondo yakho. Tsalela umnxeba, imeyile okanye WhatsApp namhlanje idinga.
Lungisa amazinyo akho
Luhlaziye uncumo lwakho
Buyisela ukuzithemba kwakho
Inyathelo Ngesibindi Kwixesha Elizayo
Ncuma kunye Invisalign ™
Ngaba uhlala ufuna amazinyo athe nkqo ngaphandle kokuqiniswa kwesinyithi? Okwenyani, i-Invisalign yoqobo kunye nezigulana ezingaphezulu kwesigidi se-10 kwihlabathi liphela. I-3D eprintiweyo yokulungelelanisa okucacileyo okuvela e-USA inokulungisa amazinyo akho kwiinyanga ezi-6.
OptiSmile WOW! Inkqubo yamazinyo emhlophe isusa amabala kunye nombala, ikhanyise amazinyo kwaye iyiphucula kakhulu indlela ejongeka ngayo.
Iinkqubo ze-OptiSmile Re-Enamelling Systems zisebenzisa itekhnoloji ye-3D enelungelo elilodwa lomenzi kunye noyilo lweDijithaliSmile ibuyisela amazinyo akho ngaphandle kokomba i-enamel yakho.
Uvavanyo olunzulu ngogqirha wamazinyo, i-panoramic x-ray, iifoto zangaphakathi zomlomo kunye nokucoca kunye ne-OptiSmile yomlomo ococekileyo.
Ngaba unayo isibheno sokumomotheka?
Indawo ephambili yeNkulumbuso yaseKapa yokuphucula impilo yomlomo, ukuvuselela uncumo kunye nokubuyiselwa okupheleleyo. Ukubonelela ngamazinyo akudidi oluphezulu lwehlabathi, iqela lethu elifudumeleyo, elinobuchule liya kukubeka ngokukhululeka ngenkonzo engxamisekileyo kunye nokhathalelo. Siza kukujonga njengobukumkani.
Uncumo lwakho, luqinisekisiwe.
Bhukisha ukubonisana nevidiyo namhlanje kwaye ungene kokutsha, uyakuthemba.
Ngaphezulu kwe-181 yokuhlolwa kweenkwenkwezi ezintlanu kuGoogle nakuFacebook, ndiyakuqinisekisa ukuba iqela lam le-OptiSmile liya kwenza amava akho abe yinto onokuyibhengeza nayo. Silapha ukukunceda ukuba ufezekise impilo esemgangathweni yomlomo kwaye sikwazi ukuncuma ngokuzithemba kunye namandla.
Incwadi Yakho Free Video thethwano
Nandipha Ubomi Ngaphandle Kokukhathazeka Ngamazinyo Akho
Izizathu ezi-6 eziKhulu zokukhetha i-OptiSmile
Cofa apha ukuze uqalise ukubonisana kwamazinyo kwi-Intanethi
Ubutyebi beengcali zamazinyo ezinesizwe nezamazwe aphesheya ziyafumaneka eOptiSmile.
Akukho zinto zenziweyo
Ngaba ukhathele kukugcwaliswa kwakho? Sikwenza ngokufanelekileyo okokuqala kwiziphumo ezingapheliyo. Inkonzo i-100% iqinisekisiwe.
Ngesiqhelo kunye neMirhumo yesiNtu
Akukho zimanga zifihlakeleyo xa ujongene neOptiSmile. Sinokukhetha ukuhlawula ukukunceda.
Kwa-OptiSmile, sizibophelele ekusebenzeni nento ekhoyo ngaphambi kokonakalisa naziphi na izinto ezikhoyo.
Sinendawo yokupaka eninzi kwaye sikwiindlela ezinkulu zothutho eThe Point Mall, eSea Point.
Zonke iinkqubo zethu zisebenzisa itekhnoloji yamazinyo ephezulu eOptiSmile Advanced Dentistry kunye neZiko lokuFakela.
Ngaba ufuna ulwazi oluthe kratya malunga neenkonzo zethu? Sinamava, ongumcebisi wamazinyo olungeleyo kwaye ulindele ukukunceda.
Fumanisa yonke into enxulumene neendleko zazo zonke iinkqubo zethu ngaphandle kwezimanga ezifihliweyo. Siza kukuhamba kuwo onke amanyathelo enkqubo yonyango.
Suite 303, The Point Mall, 76 Regent Rd, Sea Point eKapa eKapa eNtshona Koloni eMzantsi Afrika
Mon 8am - 5pm, Lwesibini 8am - 5pm
Wed 8am-5pm, Lwesine 8am-5pm
Wed ngo-8: 4 ukuya ku-XNUMX ngokuhlwa
Imigaqo nemiqathango | umthetho wabucala